Imfashini yeenja, njengendlela entsha yokuyila impahla, yazalwa kwiminyaka yokuqala kwiminyaka ye-XX. Iindibano zocweyo zokuthunga zaziphinda zenziwe kwiingubo zokubambisa abantu kwiingubo zeenja. Iivenkile zokuqala kunye nama-boutiques kwiimodyu ezine ezineemilenze kunye nabasetyhini befashini bavula iingcango zabo. Kwaye kwakunokwenzeka ukugqoka iimfuyo zabo kwiingcebiso zeendlebe zabo kwintonga yomsila.
Ngoku iingubo zokugqoka zezinja zenziwa yoshishino lonke. Abaqambi beingubo "zeenja" bahlakulela imodeli emitsha, beqwalasela iimpawu ze-anatomical zezizwe ezihlukeneyo, ukukwazi ukujamelana nokubandayo, isimo sezulu esinyulu, ukuthambekela kokunyamezela, ukukhwabanisa i-diaper. Ngako oko, iingubo kunye nezinto ezikhethiweyo zikhethwe ngamaxesha ahlukeneyo, ukuze inja ingapheli, kodwa ayifuni ukuhamba. Amawaka ama-workshops amancinci kunye neehotele ezinkulu zigqoka izambatho, izesekeli zeedandi ze-tailed.
E-US, eYurophu, eJapan naseRashiya, kukho imiboniso eyahlukeneyo kunye nemiboniso "yimizekelo" yangempela minyaka yonke. Ngaphezulu kweemifanekiso zabo, abasebenzi abakhulu bezakhono zobungcali bezakhono, abagcini bezinwele, nabaqeqeshi bezilwanyana.
Nokuba isilwanyana esilula nesibonakalayo esilula singaba yinto evelelekayo. Ukwenza oku, ukwanele ukutyelela i-salon, apho abagcobi (abalungileyo bezinwele zezinja) abayikumkhetha kuphela kwaye benze uboya obuhle, kodwa benze umbala kunye nokwenza umquba. Abanye abaphathi baya kunikezela ukuba benze ukubhoboza okanye tattoo.
Ingubo okanye i-cap, i-tracksuit, i-tuxedo okanye iingubo ezintle zokuhlwa, iintambo, iinwele zeenwele, izicathulo okanye izicathulo - yonke into ingafumaneka kwaye ithengwe kalula kunoma yimuphi umzi. Kubathengi abaqhelekileyo, abanye abathengisi benza izaphulelo ezinkulu kwaye banokunikezela ngamakhadi okuphuhlisa.
Ngaba izinja zidinga iimpahla?
Sekunjalo, ngaba iimfuyo zifuna iimpahla okanye ngaba ngaba abanini? Masizame ukuyifumanisa. Kukho iintlobo zezinja ezingakhange zilungele ukuhamba ixesha elide kwimozulu yethu. Le phantse yonke inja eneempuku ezimfutshane ezinobunzima obushushu. Kuba inja enjalo ijeka elifudumeleyo, i-waistcoat, i sweatshi yinto ebalulekileyo. Ubusika obusika kaninzi akwazi ukwenza ngaphandle kweebhuthi. Emva kwakho konke, i-paws iqhwa, kunye netyuwa, efafazwe yiendlela ngeli xesha lonyaka, inokulimaza i-pads ithenda. Izinja ezineentloko ezinde zidla ngamanye amaxesha iimpahla: ii-overalls ezikhanyayo kunye neeponples ziyakukhusela iingubo ukusuka ekungcoleni kunye nokulimala.
Abantu abaninzi bafuna ukugqoka isilwanyana sabo. Kwaye, ngokuphakamisa intloko yakhe, i-prodefilirovat abamelwane abasedulana nabo kunye nabo. Kuyinto engavamile, emnandi, ehlekisayo kwaye ehlekisayo xa inja ingubo. Abadluli-bajikeleza, bamomotheka, kunye ne-pester ngemibuzo. Ukongeza, ukhetho lweengubo kunye nesitayela lukhulu. Uthande umgca ocacileyo kunye nesigxina esiqinileyo - nceda, mhlawumbi uthanda iimfesane, i-sequins okanye i-laces?
Ukuba inja iyaphikisana
Kodwa nje kwintlekiso yazo zonke ezi "zixhobo" kwipilesi yakho? Mhlawumbi ucinge ngako? Into enhle neyintleko ayiyi kukuvuyisa, ukuba inja egqoke kuyo iya kuhlupheka. Nangona ukuba abenzi bezambatho bazama ukuyenza ibe yinto ekhululekile kwaye ingabonakaliyo kwizilwanyana, ezinye izinja ziyanqika ukugqoka izinto. Kwaye abanye abakwazi ukuziqhelanisa nale nkqubo nonke. Ukuba inja ayithandi, musa ukuyinyanzela kwaye ungayithuthuli.
Ukucoceka kunye neFestile
Akukho ingubo izakuguqula inja ukuba inobungozi obungcolileyo, ukungcola kwi-paws yayo, ubukeka bubuhlungu. Ukukhusela i-paws yeefestile kwi-slush kwaye ngokukhethekileyo ityuwa (evulelwa ngokukhululekile ezindleleni zomgca ebusika), ngaphambi kokuba uhambeyo kuyimfuneko kakhulu ukuyiphatha nge-wax nge-paws okanye i-spray ekhethekileyo. Emva kwendlela yokuhamba, hlamba i-paw yakho. Kwakhona, musa ukuzihlambalahla ukuhlamba iinwele zakho zeenja rhoqo, zidibanise, zitshintshe (kubalulekile ukuba zitshise). Njengeenwele ezihlambulukileyo zomuntu "zibiza kakhulu" kuneyona ndlela yokunyusa i-hairstyle, kwaye kunye namalungu angamaqabane amane entsapho-ukuphumelela kweqela eliphindwe kathathu lijongene noboya obuhle.
I-Aquarium ekhaya: intlanzi, iingcebiso
Izinja zizala inja yaseJamani
Numerology, yintoni ishedyuli yobomi
I-omelet i-omelet kwi-oven microwave
Ubusi busuku: ukhilimu kunye nomlomo weLancôme Absolue Absolue Cells Preells
Ungaqonda njani ukuba uthanda umntu
Indlela yokwenza ukuba lo mntu ahloniphe wena?